Mucheka, Glitter Acrylic Sheet, China Fabric, Glitter Acrylic Sheet Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Jumei Acrylic Kugadzira Co, Ltd.
Imba>chigadzirwa>Mucheka, Glitter Acrylic Sheet
Iwo Machira Acrylic machira anogona kutemwa, akaboorwa, kufambiswa, laser akacheka, akanamwa, akaumbwa, anopisa akatsikwa, uye sirika yakavhenekwa senge chero imwe standard acrylic sheet. Izvo zvakare zvakanaka mukushandisa izvo zvinoda zvimwe zvigadzirwa zveacrylic kuti zvishandiswe pamwe chete nejira pasina kudikanwa kweanosunga michina kana anonamira anonamira.
Iri jira rakasarudzika rine mapenya anopenya akadzika mukati mechinhu. Yakakura kune iwo ekugadzira mapurojekiti ayo anoshevedza anoyevedza ekuona-dhizaini dhizaini.
Ziva kuti iwo maratidziro uye kuenderana kwechaipenya kuchasiyana kubva papepa kuenda pane jira. Ikoko kunogona zvakare kuve kushoma kwepamusoro kusakwana. Izvi hazvifungidzirwe kuremara uye mhedzisiro yegadziriro yekugadzira inodiwa kugadzira machira aya.
◇ Mucheka acrylic sheet, Glitter acrylic sheet
Mucheka acrylic sheet, Glitter acrylic sheet
100% mhandara Mitsubishi zvinhu
MAKORE 15 ekugadzira ruzivo
Yakatotumirwa kunopfuura nyika makumi mapfumbamwe
Zvichakubatsira iwe kuwedzera musika mushe.
zvinhu 100% mhandara Mitsubishi zvinhu
ukobvu 2.8mm, 3mm, 3.5mm, 4mm
ruvara Sirivheri, goridhe, tsvuku, yero, girini nezvimwewo zvese mhando
Saizi yakaenzana 1220 * 1830, 1220 * 2440mm
MOQ 18 machira eumwe neumwe ukobvu / ruvara / saizi
◇ Iwo Machira Acrylic machira anogona kutemwa, akaboorwa, kufambiswa, laser akachekwa, akanamwa, akaumbwa, anopisa akatsika, uye silika yakavhenekwa senge chero imwe
yakajairwa acrylic sheet. Izvo zvakare zvakanaka mukushandisa zvinoda zvimwe zvigadzirwa zveacrylic kuti zvishandiswe pamwe chete ne
machira pasina chinodiwa chemuchina wekubatanidza kana akaomarara anonamira.
◇ Iri jira rakasarudzika rine mapenya anopenya akadzika mukati mechinhu. Yakakura kune iwo ekugadzira mapurojekiti anodaidzira kunakidza
zvigadzirwa zvinokwezva maziso.
Cherekedza kuti iyo patani uye kuenderana kweiyo glitter ichasiyana kubva papepa kuenda kune jira. Ikoko kunogona zvakare kuve kushoma pamusoro
kusakwana. Izvi hazvifungidzirwe kuremara uye mhedzisiro yegadziriro yekugadzira inodiwa kugadzira machira aya.
chigadzirwa Mucheka acrylic sheet, glitter acrylic sheet
ruvara Sirivheri inopenya, kupenya kwegoridhe, machira esirivheri, mavara machira
zera 1220x1830, 1220x2440 (mm)
mamiriro Akanaka mavara; Mamiriro ekunze kusagadzikana; Kuita kwakanaka kugona; Kwete-chepfu; Isina mvura; Eco-shamwari; Nyore kuchenesa.
1) Kushambadzira: Silk chinovhara yokudhinda, achiita zvokutemera zvinhu, pashoo bhodhi.
2) Kuvaka & Kushongedza: Mapepa ekushongedza ekunze nekunze, matura ekuchengetera.
3) Mudziyo & Mota: Yemukati yekushongedza zvinhu zvemabhazi, chitima, subway, steamships.
4) fanicha Fenicha yehofisi, kabhini kabhineti, kabati yekugezera.
5) Kushanda Kwekushanda: Thermoformed zvigadzirwa, zvakatipoteredza kuchengetedza mainjiniya.
6) Vamwe: Kuumba bhodhi, hunyoro hwemahombekombe chiratidzo, zvishongedzo zvewart, ese marudzi ese echiedza kupatsanura mahwendefa.